INetflix App ye-Mac - Kungenzeka Yini Ukulanda? - Ezokuzijabulisa
INetflix iyimboni yokusakaza ividiyo edumile eye yaqongelela ukuqashelwa emhlabeni wonke ngokuqukethwe kwayo kwekhwalithi. Inkampani ikwazile ukwandisa ukubusa kwayo cishe kuwo wonke amadivayisi. Namuhla ungathola iNetflix esebenza kumadivayisi ahlakaniphile, iziduduzi zemidlalo, amasethi we-TV, nama-PC. Kodwa-ke, kubonakala kunombono oyiphutha ngokutholakala kwayo kwi-Mac.
Akungabazeki ukuthi kunohlelo lokusebenza lwe-iOS olutholakalela iNetflix. Kepha iyatholakala kuma-macOS ama-Laptops nama-PC? Lowo ngumkhakha esizowuhlola namuhla. Ake sifunde ngalokho okulethwa yiNetflix etafuleni lamapulatifomu e-Mac.
Ingabe uhlelo lokusebenza lweNetflix lutholakalela iMac?
Alukho uhlelo lokusebenza olusemthethweni kusuka kuNetflix ye-Mac. Kuyaxaka kancane, ngoba inenguqulo yohlelo lokusebenza lwe-iOS. Isizathu sokungatholakali ukwenza uhlelo lokusebenza kuphela lwe-MacOS, inkampani kuzodingeka ukuthi itshale imali kakhulu. Noma yikuphi ukutshalwa kwezimali kungxenyekazi ebekelwe imingcele efana neMac kungahle kube ukulahleka okukhulu. Ngakho-ke, inkampani iyanqikaza ukuyicabanga.
Ngenye indlela, banikeze iNetflix ye-Mac ngokusebenzisa iziphequluli zewebhu. Iyafana nohlelo lokusebenza olujwayelekile lweNetflix, futhi ungafinyelela uhla oluphelele lwezici. Ake sichaze kabanzi ukuthi ungayisebenzisa kanjani iNetflix ye-Mac.
Funda futhi: Ungasithola Kanjani Isaphulelo Somfundi seNetflix?
Ungayisebenzisa Kanjani iNetflix On Mac?
Ungangena kuzinhlelo zokusebenza zeNetflix ngokusebenzisa noma isiphi isiphequluli sewebhu ku-Mac. Nalu uhlu lweziphequluli ongazisebenzisa:
Isiphequluli sewebhu seSafari
Isinyathelo ngesinyathelo Umhlahlandlela Wokusebenzisa:
Vakashela i-Netflix.com kunoma yisiphi isiphequluli sewebhu esishiwo ngenhla
Ngena ngemvume usebenzisa i-imeyili nephasiwedi
Ungakhetha iphrofayili njengoba ukwazi ukufinyelela kuNetflix
Khumbula, udinga ukubhalisa okuvumelekile ukusebenzisa i-Netflix.
I-interface yomsebenzisi iqonde ngqo. Ekhasini eliyisiqalo, ngemuva kokungena ngemvume, uboniswa ama-movie nezinhlelo ze-TV. Noma kunjalo, ungapheqa izigaba ngokuya ngezinhlobo. Ungasebenzisa inketho yokusesha ukuthola i-movie noma umdlalo we-TV. Ngenye indlela, uma ungakwazi ukulikhumbula igama, ungathayipha igama lomlingisi noma lomqondisi ukuze uthole imiphumela.
Ngokufana nohlelo lokusebenza lweNetflix, ungadlulisa isikhombisi sakho esithombeni noma isibhengezo se-movie ethile noma ubonise ukufinyelela amazwibela. Ungathola imininingwane ephelele ukuthi iNetflix yaziwa ngokuhlinzeka ngayo.
Ungayidlala Kanjani iNetflix Movie noma Khombisa Ku-Mac?
Ngemuva kokungena ngemvume nokuthola isihloko se-movie noma se-TV, konke okumele ukwenze ukuchofoza kukho. INetflix izolayisha isidlali sayo esizenzakalelayo, futhi i-movie izoqala ukusakaza. Ungakhetha ikhwalithi obhalisele kuyo futhi wenze ezinye izinguquko ngokuya ngokuthanda kwakho. Iyafana nohlelo lokusebenza olujwayelekile. Kukhona umugqa wesikhathi, ikhefu, ukushesha phambili, nokunye ukuxhumana okufana nakho okutholakala kuNetflix ye-Mac kusiphequluli sewebhu.
Kunombhalo ongezansi owakhiwe ngokwehlukana nomsindo ongakhetha kuwo. Ngakho-ke, ungakhetha umsindo nemibhalo engezansi ye-movie noma umbukiso otholakala kuNetflix.
Ingabe Kunomkhawulo Ku-Netflix Ye-Mac?
Ngaphandle kokuthi awunalo uhlelo lokusebenza oluzimele, ayikho imikhawulo eminingi ye-Mac. Itholakala emhlabeni wonke kuzo zonke izifunda lapho i-Netflix idlange khona. Noma kunjalo, kunomkhawulo obalulekile, ngokusho kwesiphequluli osisebenzisayo.
Ku-Google, iMozilla, ne-Opera, ungafinyelela ikhwalithi yevidiyo efinyelela ku-720P. ISafari ingaxhasa i-1080P Uma unenguqulo yeMac endala kune-11.0. Okwe-MacOS 11 nangaphezulu, ungafinyelela ikhwalithi ye-4K, uma ubhalisele ikhwalithi.
Uma ungenakho okubhaliselwe kwekhwalithi, awukwazi ukukufinyelela.
Ingabe i-Ultra HD ne-HDR Iyatholakala Ku-Netflix ye-Mac?
Yebo. I-Ultra HD ne-HDR iyatholakala ngeNetflix yeMac. Noma kunjalo, udinga iMacOS 11.0 yakamuva. Qinisekisa ukuthi i-Mac yakho iyahambisana nesibonisi sekhwalithi ephezulu sokusakazwa ukuze kusebenze. Ngaphandle kwalokho, ungahle ulayishe ngokweqile isistimu yakho, noma kungenzeka ingasebenzi.
Ukufinyelela i-HDR noma i-UHD, udinga inguqulo yakamuva yesiphequluli sewebhu seSafari. Vele, ukubhaliswa kokuqukethwe kwe-HD kubalulekile ukuze ufinyelele ikhwalithi. Lapho usuhlangabezane nalezi zidingo, ungasakaza i-Ultra HD noma i-HDR ngaphandle kwezithiyo.
Ungalanda Okuqukethwe Kusuka kuNetflix On Mac?
IMacOS ivinjelwe ukusakazwa ku-inthanethi. Ayikho indlela yokulanda okuqukethwe ku-Mac yakho. Ngamazwi alula, okuqukethwe okungaxhunyiwe ku-intanethi kweNetflix akutholakali kwi-Mac, futhi udinga uxhumano olusheshayo olusebenzayo. Noma kunjalo, kukhona i-hotfix engakwenza ukwazi ukubuka okuqukethwe okungaxhunyiwe ku-inthanethi ku-Mac.
Bamba i-IOs Yakho:
Uma unedivayisi ye-iOS efana ne-iPhone noma i-iPad, ungalanda iNetflix. Ngemuva kwalokho, ungalanda okuqukethwe kwakho okuthandayo ukuze ukusakaze kamuva ukukusebenzisa ungaxhunyiwe ku-inthanethi. Manje, lokho kukusiza kanjani nge-Mac?
Konke okudingayo yi-AirPlay noma amanye amapulatifomu okwabelana ngesikrini amadivayisi wakho we-Apple. Uzokwazi ukuvumelanisa idivayisi yakho ye-iOS ne-MacOS. Lapho usukwenzile lokho, isikrini sizobonakala ku-MacOS yakho, futhi ungabuka okuqukethwe okungaxhunyiwe ku-inthanethi. Okuwukuphela kwento ebuyisela emuva kule nqubo ukuthi udinga inethiwekhi ye-WiFi yendawo.
Ingabe kukhona okunye okungahle kwenzeke kuNetflix App ye-Mac?
Baningi izimbangi ababamba iqhaza kulo mjaho wokunikeza okuqukethwe kwekhwalithi ye-premium. IHulu ne-YouTube bancintisana kakhulu neNetflix ukuhlinzeka ngokuqukethwe okusakazwayo. Uma ufuna uhlelo lokusebenza lweqiniso, lapho-ke ungazisebenzisa lezi zingxenyekazi ezimbili. I-Apple iphinde yethule uhlelo lwayo lwe-Apple TV +, olungena kokuqukethwe okwamanje, kepha singakubona kukhuphuka ngokuzayo. Iyatholakala nge-Mac ukulanda.
Ngenkathi kungekho noma iyiphi i-Netflix App ye-Mac, uma uthola iziphequluli zewebhu ezihambisanayo, ungafinyelela kokuqukethwe. Ayinamthungo futhi ayilethi nkinga ngaphandle kokuvinjelwa okunganakwa njengokuntuleka kokulanda ungaxhunyiwe ku-inthanethi.
Ungaweli kunoma yiluphi uhlelo lokusebenza oluthi luyiNetflix ye-MacOS. Uma ingatholakali kwisiza esisemthethweni seNetflix, noma ku-Apple Mac Store, ayitholakali nge-Mac. Zigcine uvikelekile kunoma ikuphi ukukhwabanisa okungahle kwenzeke ngokusebenzisa ezinye izingxenyekazi zomgunyathi.
ingabe iphansi njengamanje
izinhlelo zokusebenza zokuskena zamahhala ze-android
sakaza amawindi wedeskithophu ku-chromecast
kubiza malini umfundi oyinhloko
youtube kuya m, p3